China Ems Pcb iNdibano Manufacture kunye Factory |KAISHENG PCB
Kwi-PCBFuture, sithatha amanyathelo angaphakathi ukuqinisekisa ukuba umgangatho womsebenzi wethu uyahambelana kwaye ugqithise ulindelo lwabathengi bethu.Iqela lethu lisebenzisa iteknoloji PCB zamva nje kunye nezixhobo ukuhlangabezana neemfuno umgangatho.Sizinikezele ekuboneleleni ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo kusincedile ukuba sizuze ukuthenjwa kunye nentlonipho kubathengi bethu.
Iileya:14 Umaleko wePCB
I-Metal Coating: i-HASL - iKhokelo yasimahla Indlela yeMveliso: SMT + Iileya: 14 Layer PCB
Iindidi zeSolder: I-Lead-Free (Ithobela i-RoHS) Iinkonzo zokumisa enye: Izixhobo, imveliso yePCB, iNdibano yePCB Uvavanyo: 100% AOI / X-ray / Uvavanyo olubonakalayo
Inkxaso yeTehnology: I-DFM yasimahla (uYilo lokuVelisa) Jonga Iindidi zeeNdibano: Mixed Technology PCBA Umgangatho: IPC-a-610d
Amagama angundoqo: I-EMS PCB Assembly, iNkonzo yeNdibano ye-PCB, Inkqubo yeNdibano ye-PCB, i-PCB Population, i-PCB Assembly Manufacturers, Iindleko zeNdibano ze-PCB, iNdibano ye-PCB eCheap,
Ukusuka kwimveliso yePCB esemgangathweni kunye neyesiko ukuya kwizisombululo zePCB eziguqukayo, iPCBFuture izibonakalise njengenkonzo yokumisa enye yazo zonke izinto zePCB.
Kutheni usebenzisa inkonzo yethu yendibano yePCB?
Sizimisele ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ezingaqhelekanga ngamaxabiso akhuphisana kakhulu.Silungelelanise ishishini lethu neqela lamahlakani acwangcisiweyo ukuhlangabezana neemfuno ezihlala zitshintsha zabathengi bethu.
Ukusuka ekuboneleleni ngeebhodi zesekethe ukuya kwisixhobo sombane esigqityiweyo, sineqela lobuchwephesha.Ngenxa yamava ethu ahlala ixesha elide, sinokunikezela ngeyona nto iphezulu kumgangatho, ukuthembeka konikezelo, kunye nokuba nokwenzeka kwezoqoqosho.
Siya kuzisa iimveliso zakho ngokukhawuleza kunaye nawuphi na omnye umenzi wePCB phaya emarikeni.
Eyona nto iphezulu kumgangatho
Inkonzo yevenkile enye
Liya kude kube nini ixesha lonikezelo emva kokuba abathengi odola iibhodi PCBA?
Ixesha lokuhanjiswa kwe-PCBA linxulumene ngokusondeleyo kwi-pre-operation.Abathengi kufuneka babonelele ngezi zinto zilandelayo kuqala.Impahla ingahanjiswa ngeentsuku ezi-3 emva kokuba zonke izixhobo zigqityiwe.Ukuba kukho inkqubo ye-DIP, kuya kuthatha iintsuku ezi-5-7 ukuhambisa.Ukuba kukho iodolo engxamisekileyo, sinokwazisa kwangaphambili yaye sinokwenza amanye amalungiselelo.
Ulwazi kufuneka lulungiselelwe ukusetyenzwa kwePCBA:
1. Ukuveliswa okusemgangathweni kwe-BOM
2. Iifayile zePCB;
4. Iifayile zeJigsaw Gerber;
5. Ifayile yokulungelelanisa indawo;
6. Uluhlu lokuxuba lwezixhobo ze-SMT zangaphambili nasemva, izixhobo ze-DIP kunye noluhlu.
Sihambisa iindibano zebhodi yesekethe ekumgangatho ophezulu ngexesha nangebhajethi, exhaswa yinkonzo yabathengi ebalaseleyo kunye nokulungiswa kobuvuvu kunye nemigaqo-nkqubo yokubuyisela ukubonelela ngomgangatho ophezulu.Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ubuza, zive ukhululekile ukuqhagamshelanasales@pcbfuture.com, siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Ngaphambili: IBhodi yoMlawuli eprintiweyo yeNdibano yeSekethe
Okulandelayo: Iinkonzo zeNdibano zeFlex PCB